[Ukara] Wondershare TunesGo Ochie - iOS Manager
Share, Jikwaa & Weghachi Your iTunes Music & Videos kpamkpam
Gbalịa Ọ Free N'ihi Windows 10/8/7 / XP / Vista Buy Ugbu a
Share & Jikwaa gị Music gbasara mkpokọta na-enweghị iTunes Mmachibido
Na TunesGo Ochie i nwere ike ịkọrọ & nyefee gị ngwaọrụ music n'ọbá akwụkwọ na iTunes, iOS Devices ma ọ bụ ihe ọ bụla PC ị họrọ. Nanị Jikọọ na ngwaọrụ gị ma na-eso music nile zuru ezu song ọmụma na àgwà. Dị ka ihe kwukwara ego, TunesGo Ochie ga-enwetaghị ọ bụla duplicates na na idetuo faịlụ ndị na-adịghị ugbu ke ebe n'ọbá akwụkwọ.
Ọ bụrụ na ị nwere ọhụrụ PC ma ọ bụ ahụhụ a usoro okuku, mgbe ahụ, TunesGo Ochie ike iwughachi gị dum iTunes n'ọbá akwụkwọ gị iPod, iPhone na iPad. Nanị jikọọ na ngwaọrụ na mbupụ gị music na video nile song ọmụma (ID3 Tags), listi ọkpụkpọ, play adabere, Fim, skips na ndị ọzọ.
Nsogbu ọ bụla na-eji iTunes 12? Ndenye Atụmatụ >>
Share Music si iCloud
Share iCloud music na vidiyo, zụrụ dị iche iche na apple ID si, na nanị ịdọrọ na dobe ha ka ha n'ọbá akwụkwọ ị na-ahọrọ. Ígwé ojii nkekọrịta na-akwado song ọmụma (ID3) mkpado, album nkà, listi ọkpụkpọ & ọzọ n'ihi a enweghị nkebi mgbanwe n'ime gị iTunes n'ọbá akwụkwọ.
Akpaghị aka Idozi & ebuli Song Ozi
Akpaghị aka idozi na populate album nkà, song ọmụma, album Ama na ndị ọzọ. Nke a dị ike audio forensics nchekwa data bụ otu ihe ahụ tinye n'ọrụ site iTunes onwe n'elu ikpo okwu na pụrụ ọbụna ịchọpụta pụrụ iche remixes.
Jikwaa & Nyefee Photos, Ozi, ana-akpo & Files
Nyefee & Jikwaa Photos
Ikpuru & dobe photos n'etiti iPhone, iPad & PC
Ike ọhụrụ albums na gị iPhone, iPad ma ọ bụ iPod ma tinye photos na ha
Wughachi furu efu iOS ngwaọrụ weghaara foto na albums si ngwaọrụ PC
Jikwaa Ndi ana-akpo
Import & Export kọntaktị site na isi okwu akwụkwọ
Kpọmkwem tinye ma ọ bụ dezie kọntaktị
Zọpụta ederede ozi, MMS & iMessages na Mgbakwụnye
Ichekwa na HTML / XML / TXT faịlụ na PC gị na maka mfe ikiri na a gasịrị oge
Otú aha ngwaahịa?
Olee otú iji weghachi merged kọntaktị.
Gịnị ka m na-eme ma ọ bụrụ na m iPod Omuma / Nano / ịkpọgharịa ada ada jikọọ?
Gịnị na-eme ma ọ bụrụ na m iTunes Library mebiri emebi.